Banyere Anyị - Jinan Mingchang Manufacture Co., Ltd.
Jinan Mingchang rụpụta Co., Ltd.
Anyi nabata gi
Jinan Mingchang rụpụta Co., Ltd. e hiwere na 2008, ọkachamara na mmepụta nke Auto akụkụ, machining akụkụ, ibe ya bụrụ na nkedo akụkụ, Akara isi, Spring, Electric ngwá ọrụ na ndị ọzọ na metal ngwaahịa. Ngwaahịa ndị dị elu, ejiji na ọtụtụ ndị na-eji arụ ọrụ ụlọ ọrụ dị iche iche, ọ bụghị naanị nwere ọtụtụ ahịa ahịa ahịa ụlọ, mana a na-ebupụkwa Asia, Europe na America.
MC rụpụta kemgbe afọ niile agbasoro "àgwà nke ngwaahịa na-adị ndụ, ịtụkwasị obi na mmepe ọrụ" azụmahịa nzube. Mbọ iji nye gị ngwaahịa dị elu na ọrụ dị mma. Nwee ọkachamara, ndị ọrụ nhazi nke raara onwe ha nye, site na imepụta ngwaahịa, ịkpụzi ebu, usoro mmepụta, maka akụkụ na usoro ọ bụla na-anwale ule na njikwa.
N'ime afọ ole na ole gara aga nke imepụta na njikwa na nyocha, MC guzobere sistemụ njikwa mma ya wee gafere asambodo asambodo ISO9001: 2008. MC iji mejuputa echiche nke okike ndi mmadu bara uru maka ndi ahia ichoro ha iji gboo mkpa nke ndi ahia di iche iche, ma na-enye ndi ahia nsogbu na nsogbu oru. Ọzọkwa ngagharị na ọhụrụ, na mma.
Jiri obi ụtọ nabata gị ma mepee ókè nke nkwurịta okwu. Anyị na-emekọrịta na ezigbo onye gị!
· China na-eduzi teknụzụ na-emepụta ihe
· Elu Ogo na Mpi Mpi
· Nnukwu ikike ikike
· Nweta Ọsọ
· Afọ 13 'Production Ahụmahụ
· Ezigbo ọrịre na Ọrụ Mrechara
· A na-ere ngwaahịa anyị n'ụwa niile
· Advanced akụrụngwa na magburu onwe talent